सुर्खेतमा युवा र वाल भेला सरोकारवाला भन्छन वालवालिकको समस्याप्रति सवै गम्भिर हुनुपर्छ – Rara Khabar
सुर्खेतमा युवा र वाल भेला सरोकारवाला भन्छन वालवालिकको समस्याप्रति सवै गम्भिर हुनुपर्छ
युवा तथा वालभेलालाई सम्वोदन गदै स्याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक टीकाराम आचार्य ।
पछिल्लो समय सुर्खेतमा वालविवाह र बालश्रमिकको समस्या वढदै गएको छ । एकतिर विद्यालय पढदै गर्दा वालवालिकाले वीचमै पढाई छाडेर विवाह गर्ने गर्छन भने अर्कोतिर पढन नपाएका वालवालिका होटेल, ग्यारेज लगायतका ठाउँमा जोखिमपूर्ण काम गदै आएका छन । त्यसैले वालश्रमिक र बालविवाह अन्त्यको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आस्था समुह सुर्खेतका अध्यक्ष सजना सुनार वताउनु हुन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारीक जस्ता कारणले वालवालिका विभिन्न समस्यामा पदै आएका छन । कमजोर आर्थिक अवस्था, धार्मिक अन्धविश्वास र सामाजिक देखासिकीले गर्दा वालविवाह, वालहिसा जस्ता समस्यासगँ वालवालिका जुध्दै आएका छन । उपदेश वाल नेटवर्क भेरीगंगा नगरपालिकाकी अध्यक्ष सुनिता जैशी बालवालिका समस्या समाधानको लागि सवैको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुहुन्छ ।
युथ फर चिल्डेन सुर्खेतका अध्यक्ष विनोद कँडेल पनि युवा र वालवालिकाको समस्यालाई सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफनै समस्याको रुपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्नेमा बताउनु हुन्छ । सरकारले वालवालिकाको हक अधिकार सुनिश्ति गदै बाल मैत्री शासन, स्थानीय निकायमा वाल सहभागीता, निशुल्क शिक्षा जस्ता कार्यक्रम संचालन गदै आएको छ । तर सरकारले गरेका यस्ता कार्यक्रम वालवालिकासम्म पुग्न नसकेको युथफर चिल्डेन सुर्खेतका सहसचिव राकेश पौडेल दावी गर्नुहुन्छ । युवा र युवाहरु आफनो भविस्यप्रति समयमै सजक नहुदा विभिन्न खालका समस्यमा पर्ने गरेका छन । आफना छोराछोरीले के गरिरहेका छन भनेर निगरानी नराखेकै कारण वालवालिका र युवाहरु कुलतमा पनि फस्ने गरेका छन । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ आफनो सुन्दर भविस्यको लागि बालवालिकाहरु आफै सजक हुनुपर्नें वताउनु हुन्छ ।
आजका वालवालिका भोलीका राष्ट्र निर्माण हुन । केही गर्ने इच्छा शक्तिका साथ अघि वढे जस्तो सुकै काममा पनि सफलता हात लाग्छ । त्यसैले मध्यपश्चिमाञ्ल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रध्यापक डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला युवा र वालवालिकालाई देश हाक्ने योजना वनाउन सुझाव दिनुहुन्छ ।
यसैवीच सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा युवा र वाल भेलाको आयोजना गरिएको छ ।
महिला विकास कार्यालय सुर्खेतले गरेको भेलामा। बाल मैत्री शासन, बालबालिकाको समस्या स्थानीय योजनामा वाल तथा युवाको सहभागीता, लगायतका विषयमा छलफल भएको छ भेलामा मध्यपश्चिमाञ्ल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रध्यापक डा. उपेन्द्र कोइरालाले आजका युवा र वालवालिका नै भोलीका मुलुक हाक्ने व्यक्ति भएकोले अहिले देखिनै भविस्य निर्माणमा लाग्न युवा र वालवालिकलाई सुझाव दिनुभयो ।
केही केही गर्ने इच्छा शक्तिका साथ अघि वढे जस्तो सुकै काममा पनि सफल हुन सकिने भन्दै उहाँले युवा र वालवालिकालाई आत्म विश्वासका साथ अघि वढनु पर्ने वताउनु भयो । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला वाल कल्यान समितिका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले युवा र वाल अवस्था नै भविस्य निर्माणको आधार भएकोले अभिभावकले आफना छोराछोरीको ख्याल गर्नुपर्ने वताउनु भयो ।
यस्तै समाज जागरण केन्द्र स्याक नेपालका निर्देशक टीकाराम आचार्यले राज्यका हरेका निकाय युवा र वालवालिकाको सहज पहुँच प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । महिला विकास कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जमुना पौडेलले बालबालिकाहरुको समस्या समाधान गर्न सरोकारबालाहरुले आ–आप्mनो स्थानबाट सहयोग गनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा वालवालिकाको क्षेत्रका काम गदै आएका विभिन्न संघसंस्थालाई सम्मान प्रदान गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः ३ असार २०७३, शुक्रबार १२:४६